Mayelana Better - Shandong Better Motor Co., Ltd
Investment & Imikhiqizo
R & D Ithimba
R & D Izinsiza kusebenza
Motors Ukuze yokuhlanza Machine
Motors Ukuze Woodworker Machine & Ukuze Ithuluzi Ingadi
Motors Ukuze Machine sokunciphisa umoya lapho zindiza
Motors Ukuze Izicelo Izithuthi
Motors Ukuze Okunye Amandla Machine
Motor Better yasungulwa kusukela Motor ishabhu of Shandong Fada Group Corporation, okwakuwuphawu ebhizinisini likahulumeni. Shandong Fada Group Corporation esungulwe ngo-1976, owawungumnyaka iphayona fan electronic nomkhiqizi cleaner-vacuum e China.
Ngo-1980, inkampani yethulwa amasu ezimanzi futhi omile cleaner wezindlu inkampani ELECTROSTAR esuka eJalimane, amazwe imigqa eziphambili ukukhiqizwa uchungechunge motor kusuka USA, Japan ne-Switzerland. Kwakuwusuku inkampani kuqala China okuyinto izuzwe ekukhiqizweni uchungechunge motor.
Ngemva kokutadisha ukubamba nokugcina kusukela nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha kanye nemishini iminyaka engaphezu kwengu-10, ke waphumelela uchungechunge motor ngoba ophakeme Washer esikhundleni amazwe omunye ngo-1999 Ngo-April 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd yabhaliswa ngempumelelo okwakuwuphawu yangasese okuhlangene isitokwe ibhizinisi. Ngo Sep. 2005, inkampani washintsha igama Shandong Better Motor Co., Ltd.
Ucingo: +86 535 8612516
Ifeksi: +86 535 861 2560
Ucingo: +86 13564093630
Kungcono Kufinyelelwe omunye Ephakeme Outp Lonyaka ...
2016 kuyinto omunye unyaka okuvuna Motor Better, ngenxa 'ukwesekwa nabasebenzi Better' amaklayenti ukusebenza kanzima. Siya ukukhula bathuthuke unyaka ngamunye. okukhipha Wonyaka ngo-2016 million 2.9 amasethi, 450.000 amasethi inc ...
Engineer Li Dongwei ababesuka e-Ohio State Unive ...
Ngo-June 8, Electric Ubunjiniyela Automation Unjiniyela Li Dongwei ababesuka e-Ohio State University USA wavakashela Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, umcwaningi postdoctoral kusukela kagesi isayensi laboratory e-Ohio ...
Ithimba iphrojekthi ye syste Imininingwane ...
Ngo-June 26, neqembu elalenza lo msebenzi yephrojekthi Imininingwane zobunjiniyela e Motor Better yasungulwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ophethe ukuklama futhi ezisebenza kule phrojekthi. Kuyinto pla ...
New High Torque 16DCT Athlonix ™ I-Mini Motor
Portescap wethula entsha 16DCT motor wayo ne-torque eliphezulu DCT uhla Athlonix izinjini. I 16DCT motor angabakhulula okuqhubekayo torque engu kuze kube 5.24 mNm ngesikhathi ubude 26mm kuphela. I 16DCT isebenzisa enamandla Neodymium ma ...
ukwenza vacuum cleaner omkhathi kusebenza kanjani?
Abathobekile cleaner wezindlu ingenye handiest yasendlini yokuhlanza zikagesi ezisetshenziswa namuhla. Design Its elula nokho ngempumelelo uye obekuzakuphela kokuba ukuhlanza uthuli nezinye izinhlayiya ezincane off evele ngesandla, futhi tu ...
© Copyright - 2010-2018: Wonke Amalungelo Agodliwe.